အရင်ကဆိုရင်များအတွက် | November 2019
သငျသညျ drivers တွေကို update လုပ်ဖို့လိုအပ်သည့်အခါ
သင်သည်မည်သည့် "geek" သို့မဟုတ်စာဖတ်ခြင်းဆောင်ပုဒ်ဖိုရမ်မှကွန်ပျူတာပြဿနာကိုဝင်ရောက်သည့်အခါအချို့ကိစ္စ၌, အာမခံအကြံပေးချက်များတစ်ဦးကားမောင်းသူကို update ပါလိမ့်မယ်။ ရဲ့ကကိုဆိုလိုသည်နှင့်ထိုသို့ပြုမှဖြစ်စေမအဘယ်အရာကိုမြင်ကြကုန်အံ့။ ကားမောင်းသူ? တစ်ဦးကားမောင်းသူကဘာလဲ? ရိုးရှင်းတဲ့စကားဒရိုင်ဘာ - ထို Windows operating system နှင့်ကွန်ပျူတာဟာ့ဒ်ဝဲနှင့်အတူအပြန်အလှန်ရန်အမျိုးမျိုးသော application များခွင့်ပြုမယ့်အစီအစဉ်ကို။
သငျသညျအခြို့သောနံပါတ်များကိုထံမှ bugged ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုဖြစ်ကြပြီးသင်တစ်ဦး Android ဖုန်းရှိပါက, ထို့နောက်သင်သည်ကောင်းစွာ (သင့်အမည်ပျက်စာရင်းက add) အခန်းပိတ်ဆို့စေခြင်းငှါ, သူ့ကိုမခေါ်ဘဲနေနှင့်ညွှန်ကြားချက်ထဲမှာဆွေးနွေးကြမည်သည့်အများအပြားကွဲပြားခြားနားတဲ့နည်းလမ်းတွေထဲမှာအဲဒီလိုလုပ်ဖို့ ။ - built-in က Android အရင်းအမြစ်များ, မလိုချင်တဲ့ခေါ်ဆိုမှုများနှင့် SMS ပိတ်ဆို့ဖို့ Third-party applications များအဖြစ်သက်ဆိုင်ရာဆက်သွယ်ရေးဝန်ဆောင်မှုများကိုအော်ပရေတာမှတဆင့်အတူ MTS, Megafon နှင့် Beeline: number ကိုပိတ်ဆို့ဖို့အောက်ပါနည်းလမ်းများကိုစဉ်းစားလိမ့်မည်။
ငါ BIOS ကိုဘယ်လို reset ပါဘူး
အခြေခံပစ္စည်းကိရိယာများနှင့်သင့်ကွန်ပျူတာ၏ setup ယာယီ BIOS ကိုထဲမှာသိမ်းထားပါတယ်, သစ်ဟာ့ဒ်ဝဲကို install ပြီးနောက်အချို့သောအကြောင်းပြချက်များအတွက်သင်သည်ပြဿနာများရှိပါက, သင်သည်သင်၏ password ကိုမေ့လျော့ကြပြီ, ဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်တစ်ခုခုကို set up မဟုတ်, သင်က၎င်း၏က default settings ကိုရန် BIOS ကို reset ဖို့လိုအပ်လိမ့်မည်။ ဒီသင်ခန်းစာမှာတော့ငါသည်သင်တို့က (ဥပမာ, စကားဝှက်တစ်ခုသတ်မှတ်ပြီး) လုပ်ဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့အခွအေနရှိဆက်တင်မှရနိုင်တဲ့အခါသင်ရှိသူများကိစ္စများတွင်သင်၏ကွန်ပျူတာသို့မဟုတ် laptop ပေါ် BIOS ကို reset နိုငျပုံကိုဥပမာပြသပါလိမ့်မယ်။
Android ပေါ်မှာတစ်ရာခိုင်နှုန်းအဖြစ်ဘက်ထရီအားသွင်း၏ရာခိုင်နှုန်းကို enable လုပ်နည်း
ပြ status bar ရိုးရှင်းစွာအလွန်သိကောင်းစရာများမဟုတ်သောအရာ "ဖြည့်အဆင့်ကို" အဖြစ်ပြသနေသည်များစွာသော Android ဖုန်းများနှင့် tablet ဘက်ထရီအားသွင်းတွင်။ ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, အဲဒီမှာ Third-party applications များသို့မဟုတ် Widgets တွေမပါဘဲ, အခြေအနေပြဘားတွင်ဘက်ထရီရာခိုင်နှုန်း display ကိုဖွင့်ဖို့ built-in 'option ကိုများသောအားဖြင့်ဖြစ်တယ်, ဒါပေမဲ့ဒီ feature က hidden ဖြစ်ပါတယ်။
RAM ကို Laptop ကို RAM ကိုတိုးမြှင့်ဖို့ကိုဘယ်လို
အနည်းငယ်လက်ပ်တော့ upgrade (သို့မဟုတ်, မည်သည့်ကိစ္စတွင်အတွက်ကြောင့်ခက်ခဲသည်), ဒါပေမယ့်အလွယ်တကူအလုံအလောက်အများအပြားကိစ္စများတွင် RAM ကိုပမာဏကိုတိုးမြှင့်ဖို့ထိတွေ့။ အဆိုပါလက်တော့၏လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှတ်ဉာဏ်ကိုတိုးပွါးစေရန်နှင့်အဓိကအားဖြင့်အတွေ့အကြုံမရှိသေးသောအသုံးပြုသူများကိုရည်ရွယ်တာဖြစ်ပါတယ်မည်သို့ခြေလှမ်းလမ်းညွှန်အားဖြင့်ဤအဆင့်။ တချို့ကလက်ပ်တော့ယခင်နှစ်ပေါင်းဥပမာဒီနေ့ရဲ့စံချိန်စံညွှန်းများဖွဲ့စည်းမှုပုံစံအားဖြင့်အပြည့်အဝမျှမျှတတမရရှိနိုင်ပါသည် - RAM ကို Core i7 နှင့် 4GB, က applications များ, ဂိမ်းများ, အတူအလုပ်၏အရေအတွက်အချို့လက်ပ်တော့ 8, 16 သို့မဟုတ် 32 gigabytes အထိတိုးမြှင့်ခံရဖို့အတော်လေးဖြစ်နိုင်ပေမယ့် ဗီဒီယိုနှင့်ဂရပ်ဖစ်အလုပ်အရှိန်မြှင့်ခြင်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်စျေးသိပ်မကြီးတဲ့နိုငျသညျ။
ဘာ .Crdownload ဖိုင်
ဒါဟာ Downloads ဖိုင်တွဲထဲမှာဒါမှမဟုတ်သင်ကအင်တာနက်ထဲကနေတစ်ခုခုကို download လုပ်ပါရှိရာအခြားသောအရပ်၌အသငျ extension ကိုနာမည်ဖိုင်တစ်ခုကိုရှာဖွေခြင်းနှင့်နံပါတ်နှင့်အတူတူပင် extension ကိုနှင့်အတူအချို့သောလိုအပ်သောအမှုအရာသို့မဟုတ် "အတည်မပြုနိုင်" .crdownload လိမ့်မည်ဟုဖြစ်ပျက်လိမ့်မည်။ အကြိမ်တစ်ဦးကစုံတွဲတစ်တွဲအဘယ်အရာကိုမျိုးကိုဖိုင်ဘယ်မှာမှရောကျ လာ. , သငျသညျပွင့်လင်း crdownload ကဖယ်ရှားပစ်ရန်ဖြစ်နိုင်ခြေရှိမရှိဖြေကြားခဲ့ရတယ် - ထို့ကြောင့်မေးခွန်းတစ်ခုရှိပါတယ်ကတည်းကတဦးတည်းအတိုဆောင်းပါးအားလုံးကိုဤမေးခွန်းများကိုဖြေဆိုရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။
ကွန်ပျူတာပေါ်မှာ Android ကိုအဆက်အသွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့ဘယ်လို
သငျသညျကွဲပြားခြားနားသောရည်ရွယ်ချက်များအတွက်ကွန်ပျူတာတစ်ခုက Android ဖုန်းသင့်ရဲ့အဆက်အသွယ်သိမ်းဆည်းရန်လိုအပ်သည်ဆိုပါက - အဲဒီမှာပိုမိုလွယ်ကူအချည်းနှီးဖြစ်၏နှင့်ဤသင့်ရဲ့အဆက်အသွယ်ယျတျောနှငျ့အတူတစ်ပြိုင်တည်းချိန်ကိုက်ခံရလျှင်ကဖုန်းပေါ်မှာနှင့်သင်၏ Google အကောင့်ထဲမှာနှစ်ဦးစလုံးသည်ကိုဆိုလိုသည်။ သင့်ရဲ့ကွန်ပျူတာပေါ်မှာသင့်ရဲ့အဆက်အသွယ်တွေကိုသိမ်းဆည်းခြင်းနှင့်တည်းဖြတ်ရန်သင့်အား enable တဲ့ third-party application များလည်းရှိပါသည်။
ဒါကြောင့်တက်ဘလက်ကနေဖုန်းခေါ်ရန်နှင့်ထိုသို့ပြုမှဘယ်လိုဖြစ်နိုင်ပါသလော ကအလုံအလောက်ထိုသို့ပြုလုပ်ရန်အော်ပရေတာ sim ကဒ်နှင့် 3G ထောက်ခံမှုဖြစ်ခဲ့သည်သို့မဟုတ်အခြားတစ်ခုခုလိုအပ်ပါသလား? ဤဆောင်းပါးသည်မခွဲခြားဘဲကတက်ဘလက်ကိုသင်ဘယ်လောက်၏, ဤ devices များနှင့်အတူဖုန်းခေါ်ဆိုမှုအောင်အပေါ်အသုံးဝင်သောသတင်းအချက်အလက် (အိုင်ပက်လမ်းကိုသာပြီးသားအိုင်ပက် 3G, အလွန်ပထမဆုံးခေတ်မမီတော့ဗားရှင်းဖြစ်ဖို့ငါ့ထံသို့လူသိများသည်) သင့်ရဲ့ Android tablet ကိုကနေခေါ်ပါဖို့ဘယ်လိုအသေးစိတ် ကိုယ်ပိုင်။
ဓာတ်ပုံများနှင့်ရုပ်ပုံများကိုတည်းဖြတ်များအတွက် features တွေတစ်ကယ့်ကိုအထင်ကြီးစရာအစုံသည်အချို့သောမကြာခဏ "အွန်လိုင်းကို Photoshop" အဖြစ်ရည်ညွှန်းထားတဲ့အများအပြားအွန်လိုင်းပုံရိပ်ကိုအယ်ဒီတာများ, ရှိပါတယ်။ Adobe က Photoshop ကို Express ကို Editor ကို - ပြုစုသူအနေဖြင့်တရားဝင် Photoshop ကိုအွန်လိုင်းအယ်ဒီတာလည်းရှိပါသည်။
ငါသည်သင်တို့၏ကွန်ပျူတာကနေ antivirus ဆော့ဖ်ဝဲကိုဖယ်ရှားဖို့ဘယ်လိုအထွေထွေဆောင်းပါးရေးထားပြီ။ ၎င်း၏ဒြပ်စင်အချို့ကိုဥပမာ installed သည့်အခါလိမ့်မည်သောသင် Kaspersky Anti-Virus နဲ့အခြား antivirus ဆော့ဖ်ဝဲကိုထည့်သွင်းဖို့ခွင့်ပြုမထားဘူးသော, ကျန်ကြွင်းပြီးနောက်ဒီကို manual ၏ပထမဦးဆုံးနည်းလမ်းပင်ကွန်ပျူတာ၏ဖယ်ရှားရေးပြီးနောက်တွေနဲ့ Windows registry ကိုအတွက်, သို့သော် antivirus ကို Avast ၏ဖယ်ရှားရေးများအတွက်ကောင်းစွာသင့်တော်ပါတယ် Avast ကို install တစ်ဦးကို PC ပေါ်မှာရေးပါ။
လူတိုင်းမသိတယ်, ဒါပေမယ့်သူကလက်စွပ်ကိုသေံနှင့်တုန်ခါမှု, မီးနှင့်တောက် flash ကိုအပြင်ဒါကြောင့်စေရန်တတ်နိုင်သမျှဖြစ်ပါသည်: ကထိုကဲ့သို့သော SMS စာတိုသို့မဟုတ်သံတမန်တို့လက်ခံရရှိအဖြစ်ဝင်ခေါ်ဆိုမှုများအတွက်, ဒါပေမယ့်လည်းအခြားအအကြောင်းကြားစာများအတွက်သာဒီလုပ်နိုင်ပါတယ်။ ဤရွေ့ကားညွှန်ကြားချက်အသေးစိတ်ဘယ်လိုအန်းဒရွိုက်ဖို့တောင်းဆိုအခါ flash ကိုသုံးစွဲဖို့။
ကြှနျတေျာ့အားလပ်ချိန်၌ငါမေးခွန်းများကို၏ဝန်ဆောင်မှုများအပေါ်ဖောက်သည်မေးခွန်းများကိုဖြေဆိုရန်အသုံးပြုနှင့် Google နှင့် Mail.ru. ဖွကွေား လက်ပ်တော့ပေါ်တွင်ယာဉ်မောင်း၏ installation ကိုရည်မှတ်မေးခွန်းတွေအသုံးအများဆုံးအမျိုးအစားတစ်ခုမှာ, အောက်မှာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းသူတို့များသောအားဖြင့်အသံ: ငါ Laptop ကိုအပေါ်ထိုကဲ့သို့သောမော်ဒယ်ကားမောင်းသူဒေါင်းလုဒ်ဆွဲနိုင်ပါသည်ဘယ်မှာနေတဲ့ laptop ကို Asus ကပေါ်မောင်းသူကို install လင့်များနှင့်တူသောပေးဖို့ဘယ်လို Windows7Install လုပ်ပါ။
ဆိုဒ်များကို Windows Defender Browser ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး phishing ကနေကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး
မဟုတ်ဤမျှကာလပတ်လုံးလွန်ခဲ့တဲ့ကျွန်မဗိုင်းရပ်စ်ဆိုက်ထုတ်စစ်ဆေးဖို့ဘယ်လိုအကြောင်းရေးခဲ့တယ်, နှင့် Microsoft ခရိုမီယမ်အပေါ်အခြေခံပြီး Google Chrome ကိုများနှင့်အခြား browsers တွေအဘို့အ Anti-malware Windows Defender Browser ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးက်ဘ်ဆိုက်များတစ်ခု extension ကိုဖြန့်ချိမယ့်ရက်အနည်းငယ်အကြာတွင်။ ဒီအကျဉ်းပြန်လည်သုံးသပ်မှာတော့ကြောင်းကိုဒေါင်းလုဒ်လုပ်ရန်နှင့်သင့် browser မှာ install လုပ်ဖို့ဘယ်လိုဘယ်မှာယင်း၏အကျိုးခံစားခွင့်, ဖြစ်နိုင်ပါတယ်အလားအလာသောအရာကိုတစ်ဦး extension တခုဖြစ်တယ်။
အတန်းဖော်များထံမှဂီတကို download လုပ်လုပ်နည်း
သငျသညျကှနျပြူတာပျေါအတန်းဖော်နှင့်အတူဂီတကို download လုပ်ပါဖို့လိုအပ်လျှင်ဤဆောင်းပါး၌သငျအခြေအနေများ၏ကျယ်ပြန့်အမျိုးမျိုးများအတွက်သင့်လျော်သောဖြစ်ကြသည်သောဤလုပ်ဖို့နည်းလမ်းများစွာ, ရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်။ အသံဖိုငျမြားကိုသင့်ကွန်ပျူတာကို Download လုပ်, သင် add-ons တွေကို (extension များ) ကိုသုံးခြင်း, Google Chrome ကို Mozilla Firefox ရဲ့, နဲ့ Opera အဘို့, သို့မဟုတ်ထို site အတန်းဖော်များထံမှဂီတဒေါင်းလုပ်များအတွက်တစ်ဦးချင်းစီအခမဲ့အစီအစဉ်များအားဖြင့်-ins plug နိုင်ပါတယ်။
အရင်ကဆိုရင်များအတွက် VirtualBox virtual machine
Virtual စက်တွေအခြားကိရိယာသို့မဟုတ်ဤဆောင်းပါး၏ဆက်စပ်အတွက်အတုယူ device ကိုဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, ရိုးရိုး, သင်တူညီတဲ့သို့မဟုတ်ကွဲပြားခြားနားသော Operating System နဲ့သင့်ကွန်ပျူတာပေါ်ရှိအလိုရှိသော operating system ကိုနှင့်အတူ (ကသာမန်ပရိုဂရမ်တစ်ခုကဲ့သို့) တစ်ဦး Virtual Machine ကို run ဖို့ခွင့်ပြုပါ။ ဥပမာအားဖြင့်, သင်၏ကွန်ပျူတာပေါ်တွင် Windows နဲ့, သင်က virtual machine အတွက် Linux ကိုသို့မဟုတ် Windows နောက်ထပ်ဗားရှင်းကို run နိုင်ပြီးပုံမှန်ကွန်ပျူတာနှင့်ဝသကဲ့သို့သူတို့နှင့်အတူအလုပ်လုပ်ကြသည်။
သင့် Android ဖုန်းနှင့်တက်ဘလက်သုံးစွဲဖို့ပုံမှန်မဟုတ်သောနည်းလမ်းများ
အဆိုပါက်ဘ်ဆိုက်များနှင့်ဗီဒီယိုများကိုကြည့်ရှုရန်, ကင်မရာလိုပဲတမန်တို့ကိုအပါအဝင်ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုများနှင့်မက်ဆေ့ခ်ျများအဘို့နှင့်လူမှုရေးကွန်ယက်တစ်ခုတွဲဖက်အဖြစ်: အများစုမှာပိုင်ရှင်တွေစံအဖြစ်မိမိတို့၏ Android ထုတ်ကုန်ကိုအသုံးပြုပါ။ သို့သော်ဤလူအပေါင်းတို့သည်သင်၏စမတ်ဖုန်းသို့မဟုတ် tablet ၏နိုင်စွမ်းသည်မဟုတ်။ ကို Android device ကိုသုံးပြီးအချို့ပုံမှန်မဟုတ်သော (အနည်းဆုံးပထမဦးဆုံးအချိန်အသုံးပြုသူများအတွက်) ကး - ဤသုံးသပ်ချက်ကိုပါ။
သငျသညျကို Windows7ဒါမှမဟုတ် 8 (ငါနဲ့အတူတူပါပဲက Windows 10 မှာဖြစ်ပျက်လိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်) တွင်တောင်း disable နှင့်တစ်ပြိုင်နက် desktop ပေါ်မှာကနေ Shortcut ကိုဖယ်ရှားလိုလျှင်ဤလမ်းညွှန်သင်ကူညီပါလိမ့်မယ်။ အားလုံးလိုအပ်သောခြေလှမ်းများမိနစ်အနည်းငယ်ကြာပါလိမ့်မယ်။ လူခြင်းတောင်းအောင်ဘယ်လိုစိတ်ဝင်စားဆိုတဲ့အချက်ကိုပြသသည်မဟုတ်, နှင့်အထဲတွင်ဖိုင်များကိုဖယ်ရှားမခံရပေမယ့်လည်းငါပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရကြောင့်ဖြစ်သင့်ကြောင်းယုံကြည်ကြဘူး: အရာအမှု၌, သင်တောင်းထဲ၌ထည့်သွင်းခြင်းမရှိဘဲဖိုင်တွေဖျက်ပစ်နိုင်သည်, ကီးဘုတ် shortcut ကို Shift + အသုံးပြု. ဖျက်ပစ်ပါ။
ထိုကဲ့သို့သောခြိမ်းခြောက်မှုများ၏တိုးတက်မှု, Malware နဲ့ Adware များ၏အရေအတွက်နှင့် ဆက်စပ်. ယနေ့လူကြိုက်အများဆုံးတူရိယာတဦးမလိုချင်တဲ့နှင့်အန္တရာယ်ရှိအစီအစဉ်များနှင့် browser ကို extensions တွေကိုဖယ်ရှားပစ်ရန် utility ။ Junkware ဖယ်ရှားရေး Tool ကို - အန္တရာယ်ရှိတဲ့ဆော့ဗ်ဝဲတိုက်ဖျက်ဖို့အခြားအခမဲ့နှင့်ထိရောက်သောနည်းလမ်းများ, ယေဘုယျအားဖြင့် Malwarebytes Anti-Malware နှင့် AdwCleaner ကျရှုံးငါ့ကိုအကြံပေးရှိရာကိစ္စများတွင်ကူညီရန်နိုငျသော။
သင့်ရဲ့ PC မှာသို့မဟုတ် Laptop ကိုတစ်ဦး hard drive ကိုချိတ်ဆက်ဖို့ကိုဘယ်လို
မှတ်စုစာအုပ်သို့မဟုတ် PC တစ်ခု hard disk ကို Installing - အရမ်းမခက်ခဲတာဝန်သို့သော်ဒီကြုံတွေ့ဘူးသောသူတို့က, ကပြုမိရဲ့ပုံကိုမသိကြပါ။ အဆိုပါမှတ်စုစာအုပ်သို့မဟုတ်ကွန်ပျူတာအတွင်းပိုင်း၏ installation နဲ့တူအဖြစ်ဖိုင်တွေကို overwrite လုပ်ဖို့ပြင်ပချိတ်ဆက်မှုအတွက်ရွေးချယ်စရာ - ဤဆောင်းပါး၌ရှိသမျှတို့ကိုငါဖြစ်နိုင်ရင် hard drive ကိုဆက်သွယ်ဘို့ options များထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်ကြိုးစားပါလိမ့်မယ်။
သင့်ရဲ့ကွန်ပျူတာကိုအတူဘုံပြဿနာများတစ်ခုမှာ - ကဖွင့်နဲ့ off (တစ်စက္ကန့်သို့မဟုတ်နှစ်ခုပြီးနောက်) ဖြစ်ပါတယ်တစ်ကြိမ်။ အောက်မှာဖေါ်ပြတဲ့အတိုင်းအများအားဖြင့်ကကြည့်: ပါဝါခလုတ်ကိုနှိပ်ခြင်း, လုပ်ငန်းစဉ်အပေါ်ကိုဖွင့် (ဒီမကြာခဏကွန်ပျူတာပေါ်မှာဒုတိယစာနယ်ဇင်းအလှည့်ဖြစ်ပါတယ်ခလုတ်များမပါဝင်ပါ) အားလုံးပရိသတ်တွေလှည့်ရများနှင့်အချိန်တိုအတွင်းပြီးနောက်ကွန်ပျူတာကိုလုံးဝပိတ်, စတင်သည်။